ကိုဗစ်၁၉-မင်္ဂလာတောင်ညွန့်က ကိုဗစ်လူနာရဲ့ ယာဉ်မောင်းကို သာကေတနေအိမ်မှာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု
ကိုဗစ်၁၉-မင်္ဂလာတောင်ညွန့်က ကိုဗစ်လူနာရဲ့ ယာဉ်မောင...
27 มี.ค. 2563 - 18:38 น.
အစိုးရက မတ်လ ၂၇ ရက်အစောပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်၁၉ ကူးစက်ခံရသူ အမျိုးသားလူနာ နေထိုင်ရာ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်က ရှစ်ထပ်တိုက်မှာနေသူတွေအားလုံးကိုအဝင်အထွက် ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
လမ်းထဲက တခြားနေအိမ်တွေကိုတော့ ပြင်ပကို ဝင်ထွက်သွားလာခွင့် ပြုထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၁၀၁ လမ်းထဲကို လမ်းမိသားစုဝင်မဟုတ်တဲ့ ပြင်ပက လူ၊ ယာဉ် ဘာတစ်ခုမှ ပေးမဝင်တော့ဘဲ ပိတ်ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လူနာမိသားစုရဲ့ ယာဉ်မောင်းက သာကေတမြို့နယ်၊အနော်မာရပ်ကွက်ထဲက ဖြစ်ပြီး သူက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ဒီကနေ့ မတ်လ ၂၇ ရက်မှာ ဆေးစစ်မှုခံယူခဲ့တယ်လို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ဖို့မြေရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်းထွန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
"သူ့ဆေးစစ်ချက်တော့ clear ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သာကေတမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနကလည်း သူ့နေအိမ်ကို သွားပြီးပါပြီ။ သူ့ကိုအိမ်ကနေ အိမ်ပြင်မထွက်ဖို့မှာထားတယ်။ သူလည်း အိမ်မှာပဲ တာဝန်ရှိသူတွေကို စောင့်နေတာပါ"လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်၁၉ လူနာကိုတော့ ဒီကနေ့မနက် ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံရဲ့ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်ကို ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ ဦးဇော်ဝင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။ ဒီလူနာနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူထဲက သမီးဖြစ်သူအပါအဝင် မိသားစုဝင်တချို့ကိုလည်း ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖို့ ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
"သူက ရောဂါအခံတော့ရှိတာပေါ့နော်။ လက်ရှိမှာတော့ အေးဆေးပါပဲ"လို့လူနာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူက ပြောပါတယ်။
လူနာနေထိုင်တဲ့ ၁၀၁ လမ်းကို ပိုးသတ်ဆေးသုံးခါဖြန်းပြီးတဲ့အပြင် အဲဒီလမ်းနဲ့ကပ်ရက် လမ်း ၁၃၀ ကိုပါ စိတ်ချရအောင် တစ်ကြိမ် ဆေးဖြန်း ပေးထားပါတယ်လို့ ဦးဇော်ဝင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်၁၉ လူနာနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ မိသားစုဝင်က ၂၀ ဦးရှိပြီး ကျန်တဲ့ တိုက်ခန်းတွေမှာလည်း ဆွေမျိုးတွေပဲ နေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လောလောဆယ် တစ်တိုက်လုံးကို စားရေးသောက်ရေး စီစဉ်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ လတ်တလော ပြည့်စုံနေကြောင်း တုံ့ပြန်တယ်လို့ ဦးဇော်ဝင်းထွန်းကပြောပါတယ်။
အခု ကိုဗစ်၁၉ လူနာဟာ အသက် ၆၉ နှစ်အရွယ် အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားကြီးဖြစ်ပြီး နှာခေါင်းကင်ဆာရောဂါကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာ ဆေးကုသမှု မကြာခဏ ခံယူနေရတာ နှစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ သြစတြေးလျမှာ တစ်လ ဆေးကုခဲ့ပြီးနောက် စင်ကာပူမှာ လေးရက်ကြာနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မြန်မာနိုင်ငံကို မတ်လ ၁၄ ရက်မှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
တီးတိန်က ကိုဗစ်၁၉ လူနာနဲ့ လေယာဉ်တစ်စီးတည်း စီးခဲ့သူ ၅၁ ဦးကို နေအိမ်တွေမှာ အဝင်အထွက် ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ နာတာရှည်ရောဂါသည်တွေ အပြင်မထွက်ဖို့ မြန်မာ အစိုးရ ပန်ကြား
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဖျားနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ လည်ချောင်းနာလက္ခဏာတွေခံစားခဲ့ရလို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရဲ့ အထူးကြပ်မတ်ကုသခန်းမှာ မတ်လ ၂၅ ရက်စပြီး စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် ကုသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူနာဆီက ဓာတ်ခွဲနမူနာယူပြီး အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) ကိုပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါ မတ်လ ၂၆ ရက်မှာ ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ အစိုးရရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီလူနာအပါအဝင် မြန်မာမှာ ကိုဗစ်၁၉ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ငါးဦးရှိပြီး ကျန်းလေးဦးဟာ အသက် ၂၀ ကျော်နဲ့ ၃၀ ကျော်အရွယ် လူလတ်ပိုင်း အမျိုးသားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုဗစ်၁၉-မင်္ဂလာတောင်ညွန့်က ကိုဗစ်လူနာရဲ့ ယာဉ်မောင်းကို သာကေတနေအိမ်မှာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု